I-Octoparse: Ithimba eliphumelelayo lokukhipha iWebhu - isazi se-Semalt
I-Web scraping iyithuluzi eliphumelelayo kakhulu kokuseshwa kwewebhu kanye nezinkampani ezama ukuthola inqwaba yolwazi ku-intanethi kusuka kumawebhusayithi ahlukahlukene, njenge-Facebook, Amazon, eBay ngokuzenzakalelayo. I-Octoparse uhlelo olukhulu lwe-scraping software olunikeza abasebenzisi bayo amanye amaphakheji amakhulu ukuqoqa idatha futhi ayiguqule ibe amafayela abukwayo njenge-HTML, i-Excel, ne-TXT. Okulandelayo kukhona okunye okukhethwa kukho okuhlinzekwa ngu-Okthoba:
Ukukhipha Idatha kusuka kumakhasi eWebhu Dynamic
Okwedlulela ithuluzi elilula lokusebenzisa elisiza abasebenzisi ukuthi bakhiphe okuqukethwe kusuka kuwebhusayithi. Isebenza ngamakhasi we-web ashukumisayo, kufaka phakathi ukukhipha idatha nge-pagination. Ngaphezu kwalokho, isevisi yayo yefu ingathola futhi igcine inani elikhulu lemininingwane.
Uqoqa Imininingwane Efihliwe Kuwebhusayithi
Kwamanye amacala abaseshi bewebhu bafuna ukuthola idatha ethize kusuka kumakhasi ewebhu, kodwa abakwazi ukuthola ulwazi oludingekayo, ngoba we-website eyinkimbinkimbi noma nganoma yisiphi esinye isizathu. I-octoparse ingathola futhi ithole konke okuqukethwe okufihliwe.
Uthola okuqukethwe ngokupheqa okungapheli
Idatha yokudweba ngokupheqa okungapheli kungaba ngumsebenzi onzima. Abaseshi bewebhu badinga ukupheqa phansi phansi kwekhasi ngalinye lamawebhusayithi abavakashelayo ukulayisha umbhalo obengeziwe noma izithombe. Okuqukethwe kuzokwazi ukulayishwa ngokuqhubekayo njengoba beqa phansi phansi kwekhasi.
Ingqungquthela ingasiza abasebenzisi ukuba bakhiphe wonke ama-hyperlink athunyelwe kuwebhusayithi ethile. Eqinisweni, inikeza abasebenzisi ngendlela elula yokuzenzakalela amakhulu e-IP, futhi ngesikhathi esifanayo, inikeza izinketho eziningi eziphambili, njenge-Ajax Timeout, ithuluzi elakhelwe ngaphakathi kwe-XPath, njll.Futhi, i-Octoparse ingakhansela idatha yabasesha bewebhu ngezicelo ezithile futhi ihambise ngempumelelo idatha ehleliwe.
Kubasebenzisi, kungcono ukwahlukanisa imisebenzi yabo, uma ngabe i-intanethi isuka. Esikhundleni sokuthola idatha yabo kusukela ekuqaleni, bangahlukanisa umsebenzi othile kumaphrojekthi amabili.
Ngo-Octoperse, abasebenzisi bewebhu bangenza izinto eziningi, njengokuvula ikhasi elithile lewebhu, ukungena ngemvume kwi-akhawunti, ukulanda izithombe, ukungena embhalweni kanye nokunye okuningi. I-Octoparse iphinde inikeze abasebenzisi bayo ngemodi ethuthukile ukubasiza ukuthi babhekane nedatha eyinkimbinkimbi kakhulu. Isibonelo, ukusebenzisa le mode, abasebenzisi badinga ukuhudula nokuphonsa amabhulogi ngaphakathi komklami wesistimu yokusebenza ukulungisa imisebenzi ehlukahlukene. Imodi ye-smart inikeza abasebenzisi ithuba lokuguqula noma yiliphi ikhasi lewebhu ngokuzenzakalelayo ku-Excel ngokucindezela inkinobho eyodwa. Eqinisweni, le medi isebenza kahle kakhulu etafuleni lamakhasi ohlu, njengemiphumela yosesho noma amakhasi wesigaba Source .